Toggaherer's Weblog | Just another WordPress.com weblog | Page 14
KHATARTA AY KU JIRAAN CARUURTA SOOMALIYEED , EE ASKARTA LAGA DHIGANAYO
Posted by: toggaherer on: June 16, 2009
Sida ku cad Warbixino,Muuqaalo iyo Sawiro laga soo ururiyay dhinacyada ku dagaalamaya Somaliya waxay si bareer ah uga xadgudbeen xeerarka caalamiga ah kadib markii ay carruur ka dhigteen
Xaalad aad u liidata ayay ku sugan yihiin Carruurta Soomaaliyed ee da’dooda u dhaxeysa 14 jir ilaa iyo 18 jir kuwaas oo ay qafaalanayaan kooxaha ka mas’uulka ah dagaalada dhiiga badan ku daatay ee ka socda Magaalada Muqdisho iyo Gobolada dalka
Dhinacyada kala ah Dowladda KMG ah, Xisbul Islaam iyo Al Shabaab ayaa si bareer ah oo aan gabasho ku jirin u bilaabeen in ay Ciidamadooda ka dhigtaan Caruurta aadka u yar yar ee aan garashada u lahayn waxa uu yahay dilka iyo kufsiga maadama ay aad u yar yar yihiin.
Kooxda Al Shabaab ayaa waxay noqotay kooxda ugu badan ee Carruurta xoog ku askareeya, sidoo kale waxay u adeegsadaan marka ay Carruurta ka dhigayaan Maleeshiyaadkooda Lacago iyo wax ay Somalida u taqaano Tashkiilin ama in Carruurta loo shido Filimaad ka hadlaya Jihaadka.
%75 askarta Shabaab waxay yihiin Carruur da’dooda lagu qiyaasay 14 jir ilaa iyo 19 jir kuwaas oo dhashay wixii ka dambeeyay markii la riday Xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre 1991 dii.
Sida uu sheegay Qabiir Soomaaliyed, Shabaabka ayaa waxay qaadan marka ay Carruurta ka dhiganayaan Maleeshiyaad dhawr Tallaabo, mida koowaad ayuu ku sheegay iyagoo kaga faa’ideysanaya Caruurta baahida markaas haysa oo dhinaca Nolosha ah ayay waxay siiyaan Lacago iyo telefoonaadka gacanta lagu qaado markaas oo Carruurto duurbidayaan inay ka mid noqdaan askarta Shabaab.
Mida Labaad waxay Shabaabku leeyihiin Koox Carruurta soo tashkiilisa oo waqti badan ku lumaya sidii ay Maskaxda ugu bedeli lahaayeen Carruurta markaas oo dhalinyarada iyagoo indha la qaban lahayn ku biiraya dagaalada iyo Maleeshiyaadka Shabaab.
Muddo haatan laga joogo Labo Toddobaad ayaa Shabaabku waxay Magaalada Muqdisho ku dileen Burhaan Xasan oo haysta dhalashada Mareykanka kaas oo Shabaabku ka mid ahaa Mareykankana ugu yimid Barnaamijka Shabaabku ku iibsadaan Carruurta oo ah Jihaad.
Sida ay sheegayan wararka Burhan ayaa xanuunsaday, kadib waxaa uu telefoonka kula hadlay eheladiisa oo Mareykanka jooga markii uu u sheegay inuu xanuunsan yahay ayay waxay ku yiraahden Nairobi imaw si lagu daaweeyo, balse Saraakiisha Shabaabka ayaa arrintaas ka biya diiday kadibna waxay toogteen Burhan Xasan.
Sidaas darteed ayaa waxaa la aaminsan yahay in Shabaabku xoog ku haystaan Carruur badan oo askartooda ka mid ah.
Gobolka Shabeellaha Hoose ayay Shabaabku ka soo afduubteen Carruur fara badan iyagoo markaas doonayay in ay xoog kaga dhigaan Caruurtaas Maleeshiyaad hubeysan oo Shabaabka u adeega.
Xisbul Islaam oo Madax u ah Xasan Dahir Aweys ayaa la xaqiijiyay ama la arkay dhawr 100 oo Carruur ah oo ku hubeysan AK47 iyo Bambooyinka Qaraxyada waa weyn dhaliya.
Warbixinada ayaa sheegaya in Xasan Dahir Aweys oo Carruurtiisa qaarkood ku nool yihiin Dalka Masar haystaana Waxbarasho iyo Caafimaad uu si bareer ah Carruur yar yar ka dhigtay Askar, isagoo siiyay Lacago si ay Noloshooda ugu dibiraan.
Dowladda KMG ah ee uu Madaxweynaha ka yahay Shariif Sh Axmed ayaa iyadana ku xadgudubtay xeerka Caalamiga ah ee diidaya in Carruurta askar laga dhigto.
Ciidamada Dowladda ayaa waxaa ka mid ah ilaa iyo 450 oo Carruur da’dooda ka hooseysa 19 jir kuwaas oo weliba ka qeyb qaatay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Marka aad eegto Carruurtaas askarta laga dhigtay waxay u badan yihiin kuwa Waalidkooda nool yihiin balse Siyaabo kala duwan looga soo kaxeystay Waalidkooda,qaar lacag ayaa loo adeegsaday qaar kalena xoog ayaa loo adeegsaday halka kuwa kalena si Maskaxyan ah looga dhaadhiciyay in dagaalada socda ay yihiin Jihaad sidaas darteedna ay haddii dhintaan Janada gali doonaan.
Haddaba intaa waxaa u sii dheer Caruurta dhaawacmaysa iyo kuwa ku dhimanaya Madaafiicda ay is weydaarsanayaan Dowladda KMG ah,Ciidamada AMISOM iyo Kooxaha isbaheysanaya ee Shabaabka iyo Xisbul Islaam
Hay’adaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Carruurta sida UNICEF ayaa looga baaqaya in ay wax ka qabtaan ama ugu yaraan ay sameyso xeelado looga hortagi karo dhibaatadaas soo food saartay Carruurta Soomaaliyed.iyadio markii horeba Carruurta aysan haysanin Waxbarasho,Nolol iyo Caafimaad qaarna ay hoy u tahay waddooyinka waa weyn ee Magaalooyinka Soomaaliya ayaa haddana loogu sii daray in Carruurta laga dhigto Ciidamo hubna loo dhiibo
Haddaba Sidee looga hortagi karaa khatartaas soo wajahday dhalinta yar yar sida qasabka ah looga dhigtay askar ka qeyb qaadanaysa Dagaalada ka socda dalkeena Soomaaliyed, Maxayse Shareecada Islaamka ka qabtaa, maxayse xeerarka caalamiga ah ka qabaan kooxdii ama shaqsiyaadkii ku dhaqaaqa in Caruur askar ka dhigto ama ka dhigtaan, Sideese looga hortagi karaa Carruurta Askarta laga dhiganayo.
Waxaan bilaabaynaa Barnaamijo lagu dhiiri gelinayo Bulshada Soomaaliyed sidii ay ugu istaagi lahaayeen difaaca Carruurta Soomaaliyed ee hubka loo dhiibay anagoo soo bandhigayna Macluumaad fara badan oo ay ka qeyb qaadanayaan Aqoonyahano Soomaaliyed ee bartay xeerarka Caalamiga ah,Culumaa’udiinka Soomaaliyed oo sharaxaad ka bixinaya waxa ay diintu ka qabto in Carruurta laga dhigto Ciidan iyo Xuquuqda ay Caruurtu ku leeyihiin Waalidkooda
FADLAN KA QEYB QAADO KA HORTAGA CARRUURTA SOOMAALIYED ASKARTA LAGA DHIGANAYO,ADIGOO DIIWAANKA GASHANAYA SHAQSIYAADKA,KOOXAHA IYO NIDAAMYADA KU XADGUDBAY CARRUURTA EE ASKARTA KA DHIGAY.
Nuuradiin Macalin Mukhtaar
SHIR XAALADA NABADGELYO EE SOOMALIYA LAGAGA ARINSANYO OO KA FURMAY ADDIS ABABA
Magaalada Addis Ababa oo xarun u ah dalka Itoobiya iyo Ururka Midowga Afrika ayaa waxaa saakay ka socda Shir looga hadlayo xaaladaha nabadgelyo xumo ee ka jira dalka Soomaaliya.
Golaha Amaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa waxay maanta ku kulansan yihiin Magaalada Addis Ababa iyagoo ka arinsanaya waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo meesha iminka xaalada guud ee dalku ay mareeyso.
Kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu soo qaadi doonaa dagaalada Dawlada Soomaaliya ka dhanka ah ee ka socda dalka Soomaaliya iyo weliba sidii Dawladaas looga taageeri lahaa dhinaca iska caabinta Kooxahan weerarada ku haya iyo dib u soo nooleyntii ciidankeedi qalabka siday.
Dhinaca kale waxaa kulankan lagu xusi doonaan sidii loo xoojin lahaa awooda ciidamada Amisom ee Muqdisho u jooga sida ay sheegtaan Nabad ilaalinta, waloow su’aali ka taagan Soomaaliya ma ka jirta Nabad la ilaaliyo?.
Shirkan iyo waxyaabaha ka soo baxa kaga bogo wararkeena dambe haddii Alle Yidhaahdo.
XAFIISKA WARQABDKA TOGAHERER
EE GEESKA AFRIKA
KAAM QAXOOTIGA ISKA DHIIBA DALKA FINLAND LAGU SII HAYO OO QARAX LALA EEGTAY
Hay’ada Laanqeyrta Cas ee dalka Finland xero ama Kaam ay maamusho oo lagu magacaabo Suomusjärvi ayaa amaankiisa aad loo adkeeyay ka dib markii Qarax sida la rumeysan ku talagal ahaa lala beegsaday.
Xeradan oo si ku meelgaadh ahaan loogu sii hayaa dadka Megengelya doonka ah ee dalka Finland iska dhiiba, ayaa waxaa saraakiisheeda amaanku xaqiijiyeen in qaraxaas aan wax dhibaata ah dadka ka soo gaadhin marka laga reebo burbur aan sidaas u weyneyn oo dhismiha Xerada soo gaadhay.
lama oga in qarxani salka ku hayo naceyb dhinaca ajaaniibta ah laakiin waxaa loo maleeynayaa in ay ka dambeeyeen dad ay madax martay cuqdada soo galootiga.
XAFIISKA WARQABDKA TOGAHERER EUROPE
SPORT NEWS:ZAHRA BANI WAA GABAR SOOMALI AH OO CAAN KU AH WARANTUURKA
Zahra Bani waa gabar ay iska dhaleen Soomaali iyo Talyaani kana tirsan xulka Dalka Talyaaniga ee ciyaara ciyaarta Javelin thrower ama Warantuurka Soomaalida u taqaan.
Zahra waxay ku dhalatey magaalada Muqdisho bishii December 31. 1979, waxayna si wanaagsan ugu hadashaa luuqada Soomaaliga iyo Talyaaniga, inkastoo ay Soomaaliya ku dhalatey oo ay ku noolayd yaraanteedii ilaa ay ka gaarto 10 sanadood.
Sanadku markuu ahaa 1989,ayay timid dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Torino iyada iyo Waalidkeed, Zahra aabaheed waa Talyaani halka Hooyadeedna ay Soomaali tahay, waxayna biloowday inay dheesho ciyaarta Vollaybal-ka, waxyar kadibna waxay u badalatey inay ciyaarto ciyaarta Warantuurka ( Javelin).
Zahra Bani waa 30 jir ku nool wax ka yar 20 sanadood dalka Talyaaniga hadana waxay caan ku tahay ciyaarta Warantuurka, dalka Talyaaniga waa laga wada yaqaan, waxayna ka mid tahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan Yurub iyo dalka Talyaaniga.
Zahra Bani warantuurkii ugu fiicnaa waxay tuurey ciyaarihii 2005 World Championships lagu qabtey dalka Finland magaalo madaxdiisa Helsinki, waxayna warantuurka gaarsiisay 62.75 Metres.
Zahra Bani waxay kaalinta labaad kaga jirta all-time list dalka Talyaaniga ciyaaraha Javelin thrower marka laga reebo Claudia Coslovich oo kaalinta Kowaad ah.
Inkastoo Zahra hakad uu ku yimid wixii ka dambeeyay sanadka 2005 ciyaaraheeda ay kor u kaceen, hadana wali waxay meel fiican kaga jirtaa ciyaaraha , waxayna ka qayb gashay ciyaarihii Olampiga 2008 Pheking dalka China, iyadoo ka mid ahayd ciyaaryahnadii u tartamayay ciyaarta Javelin, waxayna booqasho ugu timid xaruuntii ay deganaayeen ciyaaryahanadii Soomaaliyeed iyo maamulkii la socday .
Zahra Bani waxay ka gashay ciyaarihii Mediterranean Games isla markaana waxay qaaday bilada Zilver Javelin, iyadoo ka mid ahayd Women’s athletics una tartmaysay dalka Talyaaniga (Competitor for Italy)
Guulaheeda waxaa ka mid ah Zahra Bani Achievements :
Tournament Venue Result Event
2005 World Championships Helsinki, Finland 5th 62.75 m PB
Universiade İzmir, Turkey 6th 55.02 m PB
Mediterranean Games Almería, Spain 2nd 62.36 m PB
World Athletics Final Monte Carlo, Monaco 8th 55.02 m PB
2006 European Championships Gothenburg, Sweden 9th 57.91 m PB
World Athletics Final Stuttgart, Germany 6th 60.54 m PB
2007 World Championships Osaka, Japan 6th 59.02 m PB
2008 World Athletics Final Stuttgart, Germany 4th 60.22 m PB
Hadii aad u baahato inaa wax badan ka ogaato
Zahra Bani iyo ciyaaraheeda waxaa ka daalacan
IAAF profile for Zahra Bani
La Mantia confirms form with 14.51m – IAAF.org 13 June 2005 .
W/D: Yusuf Yusuf
Sports Editor of SSPAMEDIA
MUDAHARADA KA DHACAYA IRAN OO KEENAY DHIMASHO IYO ISKU DHAC CIIDAMADA IYO MUDAHARADAAYSHA
Wararkii ugu danbeeyey ee kasoo baxaya caasimada dalka Iran ee Tehraan ayaa sheegaya in 7 ruux ay ku dhinteen mudaharaadyo saaka ka dhacay magaalada Tehraan qeybo kamid ah.
Dhimashada dadka mudaharaadayey ayaa timid kadib markii iska horimaad uu dhexmaray kumanaan kun oo ah taageerayaasha hogaamiyaha mucaaridka Houssein Mousavi iyo ciidamada Amniga.
tehran_rabshadoRasaas ayaa laga maqlayey nawaaxiga Isgoyska AZADI ee magaalada Tehraan, halkaasi oo la sheegay inay weerar ku qaadeen dadka mudaharaadayey xarun ay leeyihiin ciidamada Militariga ee dalkaasi.
Mudaharaadayaasha ayaa la sheegay in ay dab qabadsiiyeen qeybo kamid ah xarunta Militariga, ayadoo taasina ay ciidamada uga jawaabeen rasaas.
Sida ay shaacisay Warbaahinta dowlada Iran, 7 ruux ayaa ku geeriyooday iska horimaadkan.
Dhinaca kale shalay ayuu hal qof ku dhintay rabshado ka dhashay mudaharaadyada ka socda magaalada Tehraan, ayadoo taageerayaasha Mousavi ay jidadka isugu soo baxeen xili ay Wasaarada Amniga ee dalkaasi Iran, mamnuucday isu soobaxa.
Mudaharaadyadan ayaa noqonaya kuwo isa soo taraya khasaarahooduna sii badanayo, arrintaasi oo ay wel wel ka muujiyeen qaar kamid ah hogaamiyaasha caalamka.
Madaxweynaha dalka Iran, Mohmuud Ahmedinajad ayaa asagu maanta u dhoofay dalka Ruushka halkaasi oo uga qeyb galayo shir looga hadlayo Amniga Qaarada Aasiya oo ka dhacaya dalkaasi.
Ahmedinajad ayaa lagu waday inuu shalay u dhoofo dalka Ruushka, balse hal maalin dib u dhigay safarkiisa arrimaha la xadhiidha buuqa ka dhashay doorashadii ka dhacday dalkiisa ee dib loogu doortay Madaxweynenimada afarta sano ee soo socota.
JEAN PIERRE BEMBA M/WEYNE XIGEENKII CONGO OO MAXKAMAD LASOO TAAGYO
Maxkamada Caalamiga ah ee ICC ee ku taal magaalada Hague ee dalka Holland ayaa ku dhawaaqday in lagu soo oogayo Madaxweyne kuxigeenkii hore ee dalkaasi Democratic Republic of Congo (DRC), Mr. Jean-Pierre Bemba danbiyo dagaal iyo kuwo ka dhan ah Xaquuqul Insaanka.
Jean-Pierre Bemba ayaa dhamaadkii sanadkii 2008 lasoo qabtay kadib markii Maxkamada Caalamiga ah ee ICC soo saartay amar ah in lasoo xidho, ayadoo maxkamada Hague ayaa shaaca ka qaaday in lagu soo oogayo danbiyo la xadhiidha falal ay ku kaceen ciidamadii ka amar qaadan jiray Mr.Bemba.
Qoraalka kasoo baxay maxkamada caalamiga ah ayaa lagu sheegay in Xaakimyada maxkamada dacwadeeda dhageysanaya ay isku raaceen in ay jiraan dacwado rasmi ah oo lagu soo oogi karo hogaamiyahan oo horey uga soo dagaalamay dalka Congo.
bemba Maxkamada ayaa sheegtay danbiyada loo heysto Mr.Bemba inay isugu jiraan:
Dilal, kufsi iyo Dhac
Waxaana la sheegay in dacwadaha lagu soo oogi doono hogaamiyahan hore ay isugu jiri doonaan 3 danbi oo ah (Danbiyo Dagaal) iyo 2 danbi oo ah (Danbiyo ka dhan ah Xaquuqul Insaanka).
Jean-Pierre Bemba ayaa kamid ahaa hogaamiyaasha kooxaha dalkaasi Congo, asagoo ka qeyb qaatay dagaaladii ka dhacay dalkaasi, falalka hada loo heysatana ay yihiin kuwo ay galeen ciidamadii ka amar qaadanayey sanadadii 2002dii illaa iyo 2003dii.
Jean-Pierre Bemba ayaa kamid noqday 4tii Madaxweyne kuxigeen ee Dowladii Kumeelgaadhka ahayd ee dalkaasi Congo ee la dhisay 2006dii.
Jean-Pierre Bemba ayaa kamid ahaa musharaxiintii jegada Madaxweynaha kula tartamay Madaxweynaha hada xilka haya ee Joseph Kabila.
Mr.Bemba ayaa xabsiga loo taxaabay xili uu fasax ku yimid dalka Belguim sanadkii tagay ee 2008dii.
XISBIYADA UCID &KULMIYE OO SHEEGAY IN XUKUUMADA &UDUB INAY BURBURINAYAAN WADAHADALADA XISBIYADA
Axsaabta Mucaaradka ah ee Somaliland ayaa sheegay in ay burbureen wada-hadallo u dhaxeeyay saddexda Xisbi Siyaasi, isla markaana waxay Xukuumadda ku eedeeyeen in ay ka shaqaynayso sidii dalka looga saari lahaa Hay’adda dhaqaale ahaan Wakiilka ka ah Deeq-bixiyayaasha Somaliland ka taageera dhinaca Doorashooyinka, si aanay Doorashooyin u qabsoomin. Waxaanay sheegeen in Xukuumaddu ay doonayso in aanay soo bixin natiijada diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha Doorashooyinku.
Siday sheegeen hoggaanka sare ee Axsaabta Mucaaradka ee UCID iyo KULMIYE oo shir-jaraa’id oo ay qabteen ka dib Warsaxaafadeed soo saaray, waxa gebi ahaanba hakad galay wada-hadallo u socday Axsaabta Qaranka.
Warsaxaafadeedkaas oo ay wada-jir ugu saxeexnaayeen Guddoomiyaha UCID Faysal Cali Waraabe iyo ku-simaha guddoomiyaha Kulmiye Muse Biixi Cabdi, ayaa wuxuu u dhignaa sidan;
“Labada Xisbi qaran ee UCID iyo KULMIYE iyagoo ka duulaya go’aanadi guddiga dhexdhexaadinta wada-hadalkii saddexda Guddoomiye Xisbi Qaran (UDUB, UCID iyo UDUB), aqbalaaddii go’aamadii guddida dhexdhexaadinta, talo-soo-jeedimihii guddida aqoonyahanka madaxa bannaan iyo Ururka Daryeelka Distoorka UDDAA, talooyinkii Salaadiinta Somaliland iyo heshiiskii saddexda Xisbi Qaran iyo Komishanka Ref/GDQ/XK/711/09, kuna taariikhaysnaa 27/05/09 iyo qoraalada Dawladaha inaga caawiya taabbo-gelinta arrimaha Doorashooyinka.
Talooyinkaas iyo go’aamadii waxay dhammaantood si wada-jor ah uga midaysan yihiin;
1-In khilaafaadkii, is-maandhaafkii iyo murugii Siyaasadeed ay soo af-jarmaan.
2-In ay dhisanto kalsooni iyo jawi-is-aaminaad oo suurtogelinaaya hirgelinta iyo habsami-u-socodka Doorasho xor iyo xalaal ah oo dib u dhac dambana lahayn. Labada Xisbi Qaran UCID iyo Kulmiye, iyagoo maanta ku haya ahmiyadda iyo mudnaanta ay leeyihiin Go’aamada iyo talooyinka kor ku xusan, waxay afar kulan la yeesheen Xisbiga UDUB iyo Madaxweyne-xigeenka, si ay isula meel dhigaan qodobada hoos ku qoran;
1-Magacaabista guddigii heer Qaran.
2-Ka-wada tashiga Komishanka Doorashooyinka Qaranka.
3-Ansixinta muddo-kordhinta-la’aanta muddada xilka Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
4-Shuruudaha deeq-bixiyayaashu soo gudbiyaan.
Mawqifka labada Xisbi ee UCID iyo KULMIYE wuxuu yahay;
1-In la sameeyo guddi (Mechanism) heer qaran ah, ayna ka qayb galaan xubnaha ka tirsan Bulsho-weynta Caalamku, kuwaas oo ah daneeyayaasha Somaliland.
2-In Komishanka Doorashooyinka lagu kordhiyo afar (4)xubnod oo ay soo magacaabaan saddexda Xisbi Qaran iyo Golaha Guurtida, si loo xoojiyo, korna loogu qaado awoodda wax-qabad iyo maamul ee Komishanka.
3-Ansixinta muddo-kordhin la’aanta muddada xilka Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
4-Labada Xisbi UCID iyo KULMIYE way aqbaleen shuruudaha iyo talooyinka Deeq-bixiyayaashu soo gudbiyeen.
Kulamadii saddexda Xisbi Qaran isugu yimaadeen waxa ka soo baxay;
1-Xisbiga UDUB oo si buuxda u diiday in laysla meel dhigo, lana fuliyo go’aamadii guddida dhexdhexaadinta.
2-Xisbiga UDUB oo si cad u deedafeeyay shuruudihii iyo talooyinkii deeq-bixiyayaasha ee ku abaarnaa meel-marin iyo suurtogelinta Doorasho Xor iyo Xalaal ah, kuna qabsoonta waqtigii loo muddeeyay.
3-Xukuumadda iyo Xisbigeeda talada haya oo ilaa hadda diidan in ay bixiso saamigii kaga soo hagaagay Lacagta Doorashada oo ah 25% Miisaaniyadda guud ee Doorashada.
4-Arrinta Komishanka khilaafaadkii ka jiray oo Xisbiga UDUB si buuxda u diiday in xubno lagu kordhiyo Komishanka, si tayadooda kor loogu qaado.
5-Labada Xubnood ee Komishanku soo jediyey in la bedelo, waa arrin Minjo-xaabinaya talooyinkii ay saddexda Xisbi kaga wada tashanayeen xal-u-helidda arrimaha Komishanka, gelinaysana werwer iyo hakad wada-hadalladii socday, waxayna marag-fur u tahay soo-jeedintii UDUB ee ahaa in la bedelo labada xubnood ee ay soo magacaabeen UCID iyo KULMIYE iyo xubin ka tirsan kuwa Xisbiga UDUB soo magacaabay. Taasi waxay caddaynaysaa in Xukuumaddu farogelin ku hayso Komishanka.
Haddaba, labada Xisbi Qaran ee UCID iyo KULMIYE waxay idiin soo gudbinayaan werwerka iyo walaaca ka haya mawqifka Madaxweynaha iyo Xisbigiisu ay ka taagan yihiin dhammaystirka iyo hirgelinta qodobada qabyada ah ee caqabadda ku ah qabsoomida Doorashada waqtigeedii loo muddeeyay in ay dhaco. Waxa kale oo mudan in la xuso in Madaxweynaha iyo Xisbigiisu aanay marnaba diyaar u ahayn in ay wada-shaqayn aaminaad leh la yeeshaan Xisbiyada.
Sidoo kale, waxa iyana werwerkeeda leh muddada kama-dambaysta ah ee deeq-bixiyayaashu u qabteen in lagu dhammaystiro hawlaha Doorashada khuseya ugu dambayn 21-June 2009, ayna ku jirto saamigii kaga soo hagaagay Xukuumadda JSL lacagta Doorashada oo ah 25% Miisaaniyadda guud ee Doorashada, welina aanay bixin Xukuumaddu. Taasina waxay daah-furaysaa in anay Xukuumadda talada haysaa ayna diyaar u ahayn qabsoomidda Doorasho ku dhacda waqtigii loo muddeeyay sababahan soo socda;
-Xukuumadda oo diiday fulinta shuruudihii iyo talooyinka Deeq-bixiyayaasha.
-Bixin-la’aanta saamigii Miisaaniyadda ku baxaysa Doorashada Madaxtooyada oo dhan 25% Miisaaniyadda guud.
-Soo-jeedinta shaqo-ka-fadhiisinta labada xubnood ee Guddida Doorashoyinka, taas oo ka marag-kacaysa, isla markaana aburaysa khilaafaad hor leh iyo waqti-lumis.
-Xukuumadda oo wefti culus u diraysa Deeq-bixiyayaasha, si ay culays ugu saarto ka-noqoshada shuruudihii iyo sidii Hay’adda Interpeace dalka looga saari lahaa.
Ugu dambayntii, labada Xisbi Qaran UCID iyo KULMIYE waxay guud ahaan Bulsho-weynta Somaliland ugu baaqayaan, kalsoonina ku siinayaan in ay diyaar u yihiin hirgelinta go’aamadii guddida Dhexdhexaadinta, talooyinka deeq-bixiyayaasha, aqoonyahanka iyo salaadiinta, isla markaana diyaar u yihiin inay si buuxda uga qayb qaataan hirgelinta dhammaan hawlaha suurogelinaya doorashada iyo ka-shaqaynta nabadgelyada guud ee Qaranka.
Baroortu Orgiga ka wayn!!!
Wa billaahi tawfiiq.”